Displaying 81-90 of 740 results.
सप्तरीमा भुमिसुधार कार्यालयमा आगजनी, मानवअधिकार आयोगको गाडी तोडफोड
सप्तरी, २६ फाल्गुन । लागतार चारदिनदेखी तनावग्रस्ग सप्तरीमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले राजविराजस्थित भुमिसुधार कार्यालयमा आगजनी गरेका छन् ।
हिजो एमाले नेताहरुको घरमा आगजनी तथा तोडफोड गरेका मोर्चाका कार्यकर्ताहरु अझै आक्रोसित छन्
मधेसको समस्या समाधान नगरे निर्वाचन गराउन असम्भव : रामचन्द्र पौडेल
चितवन, २६ फाल्गुन । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने वातावरण अझै तयार नभएको बताएका छन् । जिल्ला विकास समिति महासङ्घ नेपालले आयोजना गरेको पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले मधेसको समस्या स.. .. ..
सप्तरी आज पनि ठप्प, मोर्चाद्धारा प्रदर्शन जारी
राजविराज, २६ फाल्गुन । मधेसी मोर्चाले आज चौथो दिन पनि सप्तरी जिल्ला ठप्प पारेको छ । सप्तरीबाहेकका मधेसका सबै जिल्लाको जनजीवन सामान्य बनेको हो ।
सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, सर्लाही, रौतहटलगायतका जिल्लामा शैक्षिक संस्था, कलकाखाना, यातायात
तराई-मधेसमा चलेको गोलीले समग्र देशलाई दुख्नुपर्छ !
अतिले निम्त्याउने खति सर्बविदितै छ । अतिबादले आमन्त्रण गर्ने भनेको नै नाश र बिनाश हो । सहि र निष्ठाको हठले ढिलै भए पनि गन्तव्यमा पुर्याउन सक्छ तर सनक र बदला अनि अहंकार युक्त अहंले दुर्घटना र विपद मात्र । आज देश यस्तै अहंकार,
सप्तरी गोलीकाण्ड : मृतकका परिवारलाई १० लाख दिने सरकारको निर्णय, जाँचबुझ आयोग गठन
जाँचबुझ आयोगलाई १५ दिनभित्रमा कार्यदेश पेश गर्न निर्देशन
लहानमा मोर्चाद्धारा लाठी जुलुस प्रदर्शन, नयाँ शक्तिको पनि साथ
सिरहा, २५ फाल्गुन । मधेसी मोर्चाले सिरहाको लहानमा लाठी जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । जुलुसमा हत्यारा गृहमन्त्रीलाई फाँसी देउ, मधेस विरोधी एमाले मुर्दावाद, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजीनामा देउ लगाउतका नारा लाग्यो ।
लहानस्थित पशुपति आदर्श उच्च मावि परि
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र एमालेका नेताहरु योजना बनाएर सप्तरी घटना घटाए : यादब
काठमाडौं, २५ फाल्गुन । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र एमालेका नेताहरुले पहिले नै योजना बनाएर सप्तरी घटना घटाएको आरोप लगाएका छन् ।
रफत सञ्चार क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष यादबले यस्त
सप्तरीमा मधेसी मोर्चा आक्रोसित, एमाले नेताहरुको घरमा आगजनी र तोडफोड
सप्तरी, २५ फाल्गुन । सप्तरीमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरु आज झन बढी आक्रोसित बनेका छन् । मोर्चाका कार्यकर्ताहररु तोडफोड र आगजनीमा उत्रेका हुन् ।
मोर्चाका कार्यकर्ताले एमाले केन्द्रीय सदस्य सुनमनराज प्याकुरेलको राजविराज ४ स्थित घर